[Review] Top 6 Nước hoa Le Labo mùi nào hot nhất hiện nay | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Review] Top 6 Nước hoa Le Labo mùi nào hot nhất hiện nay | Muasalebang in Muasalebang
Le Labo perfume nakuba ingakadali i-buzz enkulu emakethe ye-Vietnamese efana ne-Chanel, i-Gucci noma i-Dior perfume. Kodwa-ke, i-Le Labo idume kakhulu emhlabeni, idala umkhuba omusha wabalandeli bobuhle ngenxa yochungechunge lwephunga elimnandi, elinezici zalo zomkhiqizo.
1 Le Labo perfume evela kuliphi izwe?
2 Imibandela yokukhetha amakha afaneleka kakhulu akwa-Le Labo
2.1 Izifundo zisebenzisa i-Le Labo perfume
2.2 Khetha isiqholo se-Le Labo ngokwezinga lokugcinwa kwephunga
2.3 Khetha amakha e-Le Labo anephunga elifanele
2.4 Khetha amakha e-Le Labo ngokusekelwe kumpendulo yabasebenzisi bangaphambilini
3 Top 6 Le Labo perfume, iyiphi iphunga elimnandi kakhulu namuhla?
3.1 1. Iziqholo ezidayisa kakhulu iLe Labo Santal 33 namuhla
3.2 2. Iziqholo zikanokusho Le Labo Rose 31
3.3 3. I-Le Labo Unisex Patchouli 24 perfume inephunga lezimbali
3.4 4. Le Labo Lys 41 ithandwa kakhulu
3.5 5. Le Labo The Noir 29 perfume in the Santal
3.6 6. Iziqholo zikanokusho zeLe Labo Bergamote 22
4 Ungawathenga kuphi amakha angempela akwaLe Labo?
Le Labo perfume evela kuliphi izwe?
I-Le Labo wumkhiqizo owasungulwa e-France ngo-2006 futhi manje ikomkhulu lenkampani liseNew York – USA futhi selinwebele emazweni ayi-10 ahlukene emhlabeni jikelele.
Le Labo perfume umkhiqizo odabuka eFrance kodwa odume kakhulu emakethe yase-US, ngakho-ke ungabuye ubhekwe njengomugqa wamakha waseMelika. Futhi kuze kube manje, i-Le Labo isineminyaka engaphezu kwe-16 isebenza, nakuba le nombolo isencane kakhulu, i-Le Labo iya ngokuya ifakazela ukukhanga kanye nesikhundla sayo ngenxa yochungechunge lwamamodeli amasha wamakha, aqashelwa abantu abaningi. intandokazi.
Ngaphandle kwalokho, izitolo zakwa-Le Labo zihlotshiswe njengeelabhorethri, futhi lapha amakhasimende angabona mathupha inqubo yokwenza isiqholo se-Le Labo. Ngaphezu kwalokho, ungaphinda ukhethe amakha ngokuya ngokuthanda kwakho, ngobulili amakha abesifazane namadoda ke ochwepheshe beLe Labo bazowenza abe yiziqholo zakho.
Ngaphezu kwalokho, ungaphrinta igama lakho kumabhodlela wamakha we-Le Labo. Lesi isici esikhethekile esidala inani eliyintandokazi kwa-Le Labo. Futhi kholwa ukuthi lo mkhiqizo uzokhula futhi wamukelwe kakhulu.
Imibandela yokukhetha amakha afaneleka kakhulu akwa-Le Labo
Ukuba nebhodlela Le Labo perfume Uma kufaneleka, isipiliyoni sokukhetha sibaluleke kakhulu. Futhi ukwenza kube lula kuwena kulesi sinyathelo, sizokunikeza imibandela ethile evelele lapho ukhetha ngale ndlela elandelayo.
Izifundo zisebenzisa i-Le Labo perfume
Into yokuqala okudingeka uyinqume ukuthi uthengele amadoda noma abesifazane ngoba amakha amabili alezi zinto ezimbili azoba namaphuzu ahlukene. Kwabesilisa, iphunga elimnandi kuzodingeka liqine futhi likhange, kanti amakha abesifazane angaba mnene futhi abe besifazane.
Khetha isiqholo se-Le Labo ngokwezinga lokugcinwa kwephunga
Isikhathi sokugcina iphunga singesinye sezici ezibalulekile ukusiza ukukhetha amakha alungile e-Le Labo. Ngokuvamile, amakha anamakha ahlala isikhathi eside azobiza ngaphezu kwamafushane. Ngakho-ke, kuye ngenjongo yokusetshenziswa nezidingo, uzokhetha i-perfume enephunga elihambisanayo.
Khetha amakha e-Le Labo anephunga elifanele
Le Labo perfume ihlukene impela ngemiklamo namakha, ngakho ilungele izinto nezitayela eziningi ezahlukene. Ngakho-ke, ngaphambi kokuthenga amakha, kufanele unqume ukuthi yiziphi izimo ozoyisebenzisa, yiziphi iphunga oyithandayo. Ukusuka lapho, khetha amakha afanele isitayela sakho.
Khetha amakha e-Le Labo ngokusekelwe kumpendulo yabasebenzisi bangaphambilini
Lokhu kuyinto ephumelela kakhulu ngoba labo abasebenzise lesi siqholo bazokwabelana ngemininingwane ngomkhiqizo. Usekela kulokho ukuze uhlole futhi ucabangele ukuthi lawo makha we-Le Labo akulungele yini.
Top 6 Le Labo perfume, iyiphi iphunga elimnandi kakhulu namuhla?
Le Labo perfume Yethulwe emakethe enamakha amaningi ahlukene. Uma uhlose ukukhetha ukuthenga ibhodlela lamakha le-Le Labo house, ungabheka ulwazi olulandelayo.
1. Iziqholo ezidayisa kakhulu iLe Labo Santal 33 namuhla
Yaziwa njengeziqholo eqenjini lomkhiqizo elidizayinelwe uhlobo lwe-Le Labo kuzo zonke izethameli ngaphandle kwabesilisa nabesifazane. Ngasikhathi sinye, i-Le Labo Santal 33 futhi iyiphunga elidume kakhulu lenkampani ngenxa yefomula yayo eyingqayizivele kakhulu nenoveli.
Kukhona ochwepheshe abaningi abadumile emhlabeni noma izivakashi ezishesha kakhulu okufanele zivume lesi siqholo kusengaphambili. Ngoba umkhiqizo uvumela ukuhogela amakha ahlukene angama-33. Lawa makha awafani nanoma yimaphi amakha adlule futhi izithako eziyinhloko yi-sandalwood, ukhuni lomsedari kanye ne-cardamom…
Ngaphezu kwalokho, i-Le Labo Santal 33 perfume inamandla okugcina iphunga futhi icwebezele kakhulu futhi yinde. Lo mkhiqizo ungahlala amahora angaba ngu-12, futhi unephunga elisakazwa ngaphakathi kwendawo engalweni. Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi benze iphathi ngokuzethemba ubusuku bonke, ngesikhathi semisebenzi yesikhathi eside.
I-Le Labo 33 perfume inephunga elimnandi nelikhangayo, iletha isitayela esiyingqayizivele kumsebenzisi. Futhi lapho kusetshenziswa amakha e-Le Labo Santal 33, amakhasimende azozakhela isitayela sokudala, ubuntu obuhambisana nomlingo kodwa hhayi ngaphansi kwentelezi yomlingo.
Ngesikhathi esifanayo, lapho ufutha i-Le Labo 33 perfume, uzozizwa sengathi ungena ehlathini eligcwele izihlahla ezindala nezindala. Ngephunga lokhuni oluvuthiwe olugcwele amandla kodwa hhayi kancane elimnandi ne-rustic.
Intengo yephromoshini engu-50ml: VND 3,500,000
Intengo yephromoshini engu-100ml: VND 4,800,000
2. Iziqholo zikanokusho Le Labo Rose 31
I-Le Labo Rose 31 perfume line nayo iyisinqumo esihle sokusiza umzimba wakho uhlale unephunga elimnandi usuku lonke okufanele uzame ukukuzwa. Ngaphezu kwalokho, lona umkhiqizo oklanyelwe ngokukhethekile abantu abanobuntu obuqondile nobunesibindi.
Umkhiqizo udalwe ngesandla somlingo somsunguli weziqholo ophambili u-Daphne Bugey. Ikakhulukazi, iresiphi iphinde ikhetheke kakhulu, kufaka phakathi amaphunga ahlukene angama-31, kodwa iphunga eliyinhloko liseyi-cool rose nezinkuni ezifudumele.
Kodwa-ke, uma uyifutha ku-Rose 31, kunzima ukuqaphela iphunga le-rose ngoba iphunga le-rose lihlangene nephunga elimnandi, okuyikhona eliyenza ifaneleke kokubili amadoda nabesifazane.
I-Le Labo Rose 31 ayikona ukubonakaliswa kobuthakathaka besifazane noma ukukhanya njengamakha amaningi e-rose. Futhi ngokuvamile umkhiqizo uphethe izici ezithandekayo nezithambile ze-hyacinth, i-agarwood efudumele futhi ejabulisayo.
I-Le Labo Rose 31 inephunga elihle kakhulu nesikhathi sokugcina, nesikhathi sokugcinwa esingafika emahoreni ayi-12, futhi iphunga elimnandi lilingana nengalo eyodwa. Kodwa-ke, ngokusho kokubuyekezwa okuningi, i-Le Labo Rose 31 perfume ayifaneleki iningi labathengi ngenxa yemvelo yayo eqinile kanye nephunga elimnandi ngaphandle kwemvelo ephakeme, elifanele amadoda kunabesifazane.
Intengo yesithenjwa yomnyango wamakha we-Le Labo Rose 31 icishe ibe ngu-6,499,000 VND / 100ml.
3. I-Le Labo Unisex Patchouli 24 perfume inephunga lezimbali
Lokhu futhi kuyiphunga eliyisiginesha leLe Labo labesilisa nabesifazane okungafanele amakhasimende azibe. Ngokuphawulekayo, la makha aklanywe uhlobo lweLe Labo, ahlanganisa izithako ezifika kwezingama-24. Zonke ziyahlangana, zihlanganise ukuze zenze iphunga elimnandi, elithambile kodwa eliheha kakhulu futhi likhanga.
Le Labo perfume 24 inomklamo olula onebhodlela lengilazi elikhanyayo kanye nekhava emhlophe enezinhlamvu ezimnyama ukusiza ukukhombisa ulwazi lomkhiqizo nolwazi lwesithako. Ngakho-ke uma uthi nhlá ungabona ukuthi yenziwe ngezandla, yaklanywa khona lapho ngaphandle kokudlula umugqa womshini futhi inomkhawulo ngobuningi.
Nokho, izinga lebhodlela liyamangalisa ngoba liqine ngokwedlulele. Mayelana nesikhathi sokugcina iphunga lomkhiqizo kufika emahoreni angu-12, futhi nekhono lokukhipha kahle kakhulu cishe ku-2m.
Uma ufutha amakha e-Le Labo Unisex emzimbeni wakho, ungacwiliswa emhlabeni ogcwele iphunga elimnandi lezimbali. Ibanga elifudumele elinephunga elimnandi lidala isici esihlukile, esiphazamisa kakhulu ukuveza ubuntu obusha bomsebenzisi.
Intengo yereferensi ye-Unisex 24 perfume imayelana ne-VND 5,240,000 / 100ml.
4. Le Labo Lys 41 ithandwa kakhulu
I-Le Labo Lys 41 iyiphunga eliklanywe ngokukhethekile okuhlanganisa izithako ezifika kwezingama-41, ezifanele amakhasimende angaphezu kweminyaka engama-25 ubudala.
Umkhiqizo unamandla okugcina iphunga kahle cishe amahora angu-7 kuya kwangu-12. Ngaleso sikhathi, ukukhulisa iphunga nakho kukude kakhulu phakathi kwama-2m. Lesi siqholo sinconywa ukuthi sisetshenziswe imini nobusuku futhi silungele ukusetshenziswa unyaka wonke.
Isithako esiyinhloko kule perfume ye-Le Labo Lys 41 iphunga lezimbali, elibonakala ngephunga elithambile lomnduze. Ngenxa yalokho, uma isetshenziswa, kuzokwenza kube lula ukugqama esixukwini, ukuzethemba okwengeziwe ukuya emaphathini ubusuku bonke noma imisebenzi isikhathi eside.
Iphunga lalesi siqholo libonisa isitayela esimnene, esigcwele ubufazi. Ngakho-ke i-Hung inamandla ngokulinganayo futhi inamandla, ilungele ukusetshenziswa nawo womabili amadoda.
Intengo yereferensi ye-Le Labo Lys 41 perfume cishe i-6,500,000 VND / 100ml.
5. Le Labo The Noir 29 perfume in the Santal
I-brand ye-Le Labo idume ngeqoqo layo le-unisex elibizwa ngokuthi i-Santal, kanye ne- Le Labo perfume I-Noir 29 nayo iyilungu laleli qoqo. Ukwethulwa kokuqala komkhiqizo ngo-2006, kuze kube manje, leli bhodlela lamakha lisathandwa kakhulu futhi selithole indawo emhlabeni wamakha.
Leli bhodlela lamakha linomklamo ojwayeleke kakhulu njengemikhiqizo ye-Santal unisex, ngakho i-Le Labo The Noir 29 izolihlukanisa “kubafowabo” ngesitikha esisemzimbeni webhodlela.
Iphunga le-Le Labo The Noir 29 linesitayela esinesibindi, esihehayo, esinephunga elimnandi kakhulu futhi siyakhanga. Ukuvula kuzoba iphunga lobumnandi nobunkimbinkimbi ngenxa yeBergamot, amakhiwane ahlanganiswe neqabunga le-bay. Ukudonsela kunothi eliphakathi kuzoba iphunga eliheha ngokwedlulele nelithandekayo lokhuni lomsedari, i-vetiver ne-musk. Kuze kube sekupheleni, iphunga lotshani obomile liyaqabula impela.
Intengo yereferensi ye-Le Labo The Noir 29 perfume cishe i-6,000,000 VND.
6. Iziqholo zikanokusho zeLe Labo Bergamote 22
Amakha okugcina esifuna ukuyethula kulesi sihloko futhi ibhodlela lamakha leqoqo leSantal – Le Labo Bergamote 22.
Ubukhulu baleli bhodlela lamakha buye bathandwa, baqashelwa futhi baziswa ngamakhasimende emhlabeni jikelele. Konke sibonga ukwakheka okunephunga elimnandi okudala imfudumalo ne-charisma. Ngaphezu kwalokho, iBergamote 22 ithathwa njengefanele abesilisa nabesifazane.
Idizayini yomkhiqizo nayo ingumklamo ojwayelekile njengemigqa yamakha yangaphambilini yenkampani. Kodwa-ke, ungakwazi ukuhlukanisa kalula i-Le Labo Bergamote 22 ngenxa yoketshezi lwamakha aphuzi acwebezelayo ngaphakathi kwesitsha sengilazi.
Umkhiqizo unenani lezithako eziyinhloko zokudala la mafutha ephunga, okungakhulunywa ngawo: inhlaka, i-musk, i-grapefruit noma i-vetiver. Ihambisana nephunga lamafutha abalulekile eqabunga lewolintshi, i-bergamot, i-vanilla, izimbali eziwolintshi futhi ekugcineni ukhuni lomsedari olusha.
Intengo yereferensi ye-Le Labo Bergamote 22 perfume cishe i-VND 6,650,000
Ungawathenga kuphi amakha angempela akwaLe Labo?
Le Labo perfume iwumugqa wamakha osezingeni eliphezulu othandwa emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Futhi manje lo mugqa wamakha ufika eVietnam futhi wenza umbono oqinile kubathengi baseVietnam.
Kodwa-ke, akulula ukuthenga imikhiqizo yangempela yamakha e-Le Labo ngoba okwamanje uhlobo lusakazwa kuphela emazweni ayi-10.
Ungathola futhi uthenge imikhiqizo ezinkampanini ezinedumela elihle, nedumela elihle elithengisa imikhiqizo eHanoi noma eHo Chi Minh City. Ngaphezu kwalokho, ungacela izihlobo ezihlala eFrance nase-US ukuthi zithenge futhi zizithumele ukuze ziqiniseke.
Noma ungathenga imikhiqizo yamakha e-Le Labo kumasayithi e-e-commerce agxile ekuhlinzekeni izimpahla eziphathwa ngesandla zangaphandle. Kodwa khumbula ukuhlola idumela nokubuyekezwa kwabathengi bangaphambilini.
Ngakho-ke sikunikeze ulwazi oluthakazelisayo mayelana nolayini Le Labo perfume waseFrance. Futhi uma uhlose ukuthenga umkhiqizo walo mkhiqizo, ungabhekisela esihlokweni sanamuhla ukuze uthole isipiliyoni esihle kakhulu neziphakamiso!
Xem Thêm Top 9 Kem Chống Nắng Tốt Nhất Hiện Nay 2022 | Muasalebang
Tai nghe Defunc True Go | Muasalebang